🥇 ▷ Horey waxaa ugujiraan Jax iyo Mileena filimka Mortal Kombat ✅
Horey waxaa ugujiraan Jax iyo Mileena filimka Mortal Kombat
Faahfaahin dheeraad ah iyo faahfaahin badan oo ku saabsan filimka Mortal Kombat iyo qaybinta jilayaasha ka qayb qaadan doona. Xaqiiqdii, shalay waxaan ogaannay in Ludi Lin, jilaa ka soo dhex muuqday Aquaman, Waxaan wadahadal kula jiray inaan ciyaaro Liu Kang.
Hadda, waxaan si dhab ah u ognahay in jilaa Shiine-Kanad-ka uu qayb ka noqon doono wax soo saarka oo uu mas’uul ka noqon doono inuu naf u siiyo halganka bari. Dhinaca kale, jilayaasha ka ciyaari doona Mileena iyo Jax ee filimkan dib ayaa loo soo xaqiijiyay.
Dagaalyahankii dilaa ayaa masuul ka noqon doona Sisi Stringer, oo ah jilaa aan ku aragnay Matt Gaffney Waa Inuu Dhinto. Dhanka kale, Jax wuxuu xiddig ka noqon doonaa jilaa Mareykan ah Mehcad Brooks, oo aad hubaal u xasuusato Ku Saabsan Habeenki Shalay, Roughness lagama maarmaanka ah, oo ka mid ah waxsoosaarka kale ee filimka iyo telefishanka.
Sidoo kale, warbixino dhowr ah ayaa sheegaya in Tadanobu Asano, oo ah jilaa ka soo muuqday Thor: Ragnarok, wuxuu ka mid noqon karaa filimka Mortal Kombat. Waxaa la ogsoon yahay in jilaagu doonayo doorka halyeeyga Raiden.
Aad ayaan ugu faraxsanahay dhamaan taageerayaasha MK-ga xawaareynaya inay taxanaha horumarsan yihiin. Ixtiraam Robin Shou muujinta OG LK. Meel la isku hallayn karo oo kibirka badan oo innaga mid ah ayaa ina tirinaysa. Waqtiyadu way isbedelayaan laakiin caqabadaha ayaa imanaya. Diyaar ayaan u ahay dagaalka. #MORTAL KOMBAT! #Liu Kang
– LudiLin (@ludi_lin) Ogosto 17, 2019
Sharafta Lahayd Akhris
Xusuusnow sheygan waxaan ku iri inaan ka sheegi doono miyaa? Anigu waxaan ahay sida “Jax” Briggs filimka Mortal Kombat-ka cusub ????
Mortal Kombat wuxuu ka soo baxayaa qalabka korantada wuxuuna soo galayaa shaashadda weyn … Https://t.co/3AvtupjLyV
– Mehcad (@MehcadBrooks) Ogosto 16, 2019
Waxaan ku xasuusinaynaa in mid ka mid ah jilaayaasha horaan loo xaqiijiyey uu yahay Joe Taslim, kaasoo mas’uul ka noqon doona inuu nolosha siiyo Sub-Zero. Sidan, kabka filimka cusub ayaa qaab yeelanaya. Hubaashan maalmaha soo socda waxaa loo muujin doonaa jilaayaal badan oo aan ku arki doono cajalad.
Soo saarista filimka ayaa bilaabmi doonta sanadkan waxayna ka dhici doontaa Australia. Si kastaba ha noqotee, sugitaanka muuqaalkiisu wuxuu noqon doonaa xoogaa dheer, maadaama uu ku soo bixi doono shaashadaha shaneemada illaa Maarso 5, 2021. Greg Russo, qoraha wax soo saare ee soo-saaraha, ayaa dhowaan ka hadlay ahmiyada shirqoolka iyo jilayaasha.
Dhimashada Kombat 11 waxaa loo heli karaa PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One iyo PC. Halkan waxaad ka heli doontaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isaga.